Mid ka mid ah ururada ka shaqeeya shirkadayda ayaa i weydiisanaya inaan qol u qoondeeyo naasnuujinta. Maxay yihiin waajibaadka iga saaran arrintan? Ururku miyuu igu qasbi karaa rakibida noocaas ah?
Naasnuujinta: qodobbada Xeerka Shaqada
Xusuusnow, in hal sano laga bilaabo maalinta dhalashada, shaqaalahaaga nuujinaya ilmaheeda ay leedahay, ujeedkan awgeed, hal saac maalintii maalintii inta lagu jiro saacadaha shaqada (Xeerka Shaqada, farshaxanka. L. 1225-30). Xitaa iyadu waxay leedahay ikhtiyaar ah inay naasnuujiso ilmaheeda aasaaska. Saacada ay heli karto shaqaale si ay u naas nuujiso cunugeeda ayaa loo kala qeybiyay labo xilli oo soddon daqiiqo ah, midna xilliga shaqada subax, midna galabtii.
Muddada la joojinayo shaqada naas-nuujinta waxaa go'aaminaya heshiiska u dhexeeya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Haddii aan heshiis la gaarin, muddadan waxaa la dhigaa bartamaha maalin kasta oo nus ah oo shaqo ah.
Intaas waxaa sii dheer, maskaxda ku hay in shaqo-bixiye kasta oo shaqaaleysiiya in ka badan 100 shaqaale lagu amri karo inuu ka dhiso aasaaskiisa ama agagaarka dhismaha loogu talagalay naasnuujinta (Xeerka Shaqada, farshaxanka. L. 1225-32) ...
Naas nuujinta: waa maxay waajibaadkayagu? July 10th, 2021Tranquillus
READ Magdhowga lagu bixiyay heshiiska wadajirka ah ee shaqada Axadda ma khuseeyo dhammaan shaqaalaha shaqeeya maalintaas!
horeKu hagaaji heerka higgaaddaada fiidiyoow
socdaShaqaaluhu ma dalban karaa faa'iidada gunno sanadle ah oo lagu bixiyo heshiiskiisa wadajirka ah haddii ay dhacdo in loo baahdo xil ka qaadistiisa?